वर्षेनी बढ्दो प्राकृतिक विपत्तिः कुन वर्षमा कति क्षति ? (विवरणसहित) « Nagarik Khabar
वर्षेनी बढ्दो प्राकृतिक विपत्तिः कुन वर्षमा कति क्षति ? (विवरणसहित)
प्रकाशित मिति : 1 August, 2021 3:11 pm
विपद् व्यवस्थापन विज्ञ कृष्ण देवकोटा पछिल्ला वर्षमा पहिराबाट हुने विपद् थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताउँछन् । उनका अनुसार विपद्का दृष्टिले भूकम्पलाई छाडेर हेर्दा पछिल्लो दशक बाढीका कारणले हुने मृत्यु दर घटेको तर पहिराबाट हुने क्षति भने बढेको छ । उहाँले बाढी र पहिराजन्य घटना भने बढेको छ । “मुख्यतः पूर्वसूचना प्रणाली तुलनात्मकरुपमा प्रभावकारी देखिएकाले र जनचेतना बढेकाले सावधानी अपनाउने क्रम बढ्दा बाढीबाट हुने क्षति घटेको हो, भलै कुनैकुनै वर्ष बढेको हुनसक्छ, देवकोटाले अगाडि थप्नुभयो, “तुलनात्मकरुपमा पहिराबाट मृत्यु बढेको छ ।”
उनी यसरी पहिरो बढ्नुमा पहाडी इलाकामा बाटोको सङ्ख्या वृद्धि हुने तर रोकथामका उपाए नअपनाइनु कारक हो भन्छन् । अर्को कारण भने एकै ठाउँमा धेरै पानी (हाँडीघोप्टे पानी) पर्दा भेल पहिराले जनधनको ठूलो क्षति गराएको छ । गएको दुई वर्षमा सिन्धुपाल्चोक, बाग्लुङ, मनाङ, कास्की, तनहुँ, लमजुङ, पर्वतलगायत दर्जन जिल्लामा एकै ठाउँमा बढी पानी परेर भेल पहिरो आएको देखिएको छ ।
एक दशकको छ वर्ष बाढीले बढी मानवीय क्षति गराएको छ । प्राप्त विवरणअनुसार पहिराबाट बढी क्षति (विसं २०६८, ७०, ७१, ७२, ७३ र ७७ मा क्रमशः १२६, १३१, १२९, १३५, १४७ र ३०१ को मृत्यु) भएको छ । चट्याङ्ले विसं २०६८, ६९ र ७६ मा बढी मानवीय क्षति गरायो । बाढीले २०७४ सालमा मात्रै बढी क्षति ९१६६ मृत्यु० गराएको छ भने आगलागीबाट विसं २०७५ सालमा सबैभन्दा बढी ८९ जनाको मृत्यु भयो । विपद्बाट एक दशकमा ८१३ वेपत्ता र आठ हजार २२९ जना घाइते भए ।
चितवन । नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) भरतपुर महानगर कमिटीकोे विस्तारित बैठक मंगलबार सम्पन्न भएको
काठमाडौं । प्रहरीले पथरी शनिश्चरे नगरपालिका-२ मा रहेको सेल्फी रोडमा यौन क्रियाकलापमा लिप्त भइरहेको एक